Maareynta CTAs ama Xayeysiisyada WordPress | Martech Zone
Maareynta CTAs ama Xayeysiiska leh WordPress
Isniin, Disembar 30, 2013 Jimco, Diisambar 1, 2017 Douglas Karr
Waxaan ku wadnaa isku-darka iibsiyada xayeysiiska bartayada - oo ay ku jiraan baaqyada ficillada ku socda ee kor u qaadaya adeegyadeenna, xayeysiisyada ku xiran shirkadaha aan ku kalsoon nahay, iyo xayeysiisyada kafaala qaaday shirkadaha aan dooranay inaan la kaashanno. Isku-darka kaladuwan ee xirmooyinka waa kuwo aad u adag, sidaa darteed waxaan ku darsannay baro xayeysiis ah mawduuceena si aan u maamulno xayeysiinta bandhigga.
Isku darka Xulashada muuqaalka Jetpack la widgets, gelinta ku habboon oo firfircoon wicitaano-in-tallaabo ama xayeysiis waa mid aad u fudud in lagu dhammaystiro WordPress maanta. Boggaaga WordPress ma bixin karo xayeysiin dibadeed ama waxay u baahan tahay xulashooyinka aan sameyno. Xaqiiqdii, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad maareeyso CTA-gaaga. AdPress waa shey WordPress ah si gaar ah loogu dhisay tan.
AdPress waa xayeysiis qiimo leh oo lagu maareeyo Xayeysiiska. Waa madal awood leh oo si buuxda u muuqata oo lagu iibiyo laguna soo bandhigo xayeysiisyada bartaada WordPress:
Setup fudud - Abuur ololehaaga qasabno yar adoo adeegsanaya Nashqadeeyaha Xayeysiiska AdPress. Sheeg sida aad u soo bandhigi doonto Ad, Call To Action Ad, qandaraaska iibka… Isku-darka Aagaaga Xayeysiiska ah ee bartaada ayaa aad u fudud. AdPress wuxuu leeyahay widget, shortcode iyo taageero shaqo.
Iibinta otomaatiga ah - Isticmaalayaasha ayaa isdiiwaan galiya oo ka iibsada Goobaha Xayeysiiska dashboard-kooda. Bixinta si otomaatig ah ayaa loola macaamilaa PayPal. Marka isticmaale adeegsigu wax iibsado, waxaa lagugu ogeysiinayaa dashboardkaaga, waadna aqbali kartaa ama diidi kartaa Xayeysiintooda. Lacag celinta PayPal waa la taageeray sidoo kale.
Falanqaynta Xayeysiiska - Xogta Xayeysiiska waa loo heli karaa Maamulka iyo macmiilka iibsaday Xayeysiiska. AdPress waxay siisaa tirakoob faahfaahsan CTR, Celcelis ahaan iyo jaantus fiican.
Taariikhda, Soo Dejinta / Dhoofinta, Customization - AdPress wuxuu diiwaangeliyaa taariikhda iibsiga Xayeysiis kasta. Waxa kale oo ay leedahay muuqaal soo dejin iyo dhoofineed oo awood badan leh oo dhan ama qayb ka mid ah xogtaada ku kaydinaya fayl kayd ah. AdPress Ads si buuxda ayaa loo qaabeyn karaa. Koodhka HTML-ka iyo CSS ee la soo saaray ee Xayeysiiska waa laga beddeli karaa guddiga dejimaha.
Caawinaad iyo Taageero - AdPress wuxuu la yimaadaa fayl caawimaad oo aad u faahfaahsan. Waxay sidoo kale bixiyaan taageero aad u dhakhso badan (forum + emails). Filo jawaab maalin ama laba gudahood.
Isticmaal xiriiriyeheena xiriirka isla markaana waad awoodi kartaa ku soo dejiso AdPress boggaaga kaliya $ 35. Fidinta waxay leedahay qiimeyn sare iyo ku dhowaad hal kun oo iibsi ilaa maanta.
Tags: maareeyaha xayeysiiskaadpressmaareeyaha ololahamaareeyaha xayeysiiska wordpressmaareeyaha ololaha wordpressplugin WordPress
Suuq-geynta Mawduuca Foomka Dheer
Iibka: Sannadkaaga iswada ee Dib-u-eegista Macluumaadka